बाँकेमा स्थानीय सरकारको ६ अर्ब बढीको बजेट – Radio Bageshwori FM 94.6 MHz
बाँकेमा स्थानीय सरकारको ६ अर्ब बढीको बजेट
बाँकेका आठ वटै स्थानीय तहले बुधबार आगामी आ.व.का लागि बजेट ल्याएका छन् । बाँकेका स्थानीय तहले ६ अर्ब भन्दा बढीको आय, व्याय प्रस्तुत गरेका हुन् । बाँकेका स्थानीय तहले ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको आय, व्याय प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बाँकेमा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आय, व्याय प्रस्तुत गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले एक अर्व ४७ करोड ९६ लाख ५४ हजार ७६० रुपियाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको हो । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले रु. ८६ करोड, १७ लाख १० हजार पाँच सय ११ रुपैयाँको प्रस्तावित बजेट ल्याएको छ । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले ७६ करोड ३७ लाख ४१ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँको बजेट बुधबार भएको गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै, जानकी गाउँपालिकाले आगमी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ५९ करोड ५६ लाख ८२ हजार ८० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
डुडुवा गाउँपालिकाले ५६ करोड ५७ लाख ५ हजार ३४४ को बजेट गाउँसभामा प्रस्ताव गरेको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ७९ करोड ३३ लाख ६ सय ९० रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । गाउँपालिकाको बुधबार आयोजित सातौं गाउँसभाले उक्त बजेट पारित गरेको हो ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले ५५ करोडको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभामा बुधबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले ५५ करोड २८ लाख २३ हजार ३ सय ६० को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बाँकेका स्थानीय तहले कृषिमा फोकस गरेर बजेट ल्याएका छन् । स्थानीय तहले कृषि मार्फत आत्मनिर्भर,स्वरोजगार सँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई क्रमशः प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
वामगठबन्धन उम्मेदवारको चिनारीसहित प्रतिबद्धतापत्र लिएर घरदैलोमा
नेपालगञ्ज, मंसीर–५ । वामगठबन्धनका उम्मेदवारहरु व्यक्तिगत चिनारी र विकासे एजेन्डासहितको प्रतिबद्धतापत्र लिएर घरदैलोमा पुगेका छन् । मंगलबार नेपालगञ्जको वडा नं. ९ बाँकेगाउँ आसपासमा वामगठबन्धनका उम्मेद
चुनावी एजेन्डा बोकेर मत माग्दै वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार
नेपालगञ्ज, कार्तिक–३० । संयुक्त वाम गठबन्धन क्षेत्र नं. २ बाँकेले घरदैलो अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । मतदाताहरुको घरदैलोमा पुगेर उम्मेद्वारहरुले मत माग्न थालेपछि निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । संयुक्त
न्युज श्रीस्वस्थानी व्रत आजबाट शुरु
न्युज दैलेखमा माइक्रोबस दुर्घटना हुँदा ३ को मृत्यु, १६ जना घाइते
न्युज नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन अभाव
न्युज काम गरेर देखाउने राईको भनाई